Hitsahatra tsy hivarotra ireo vokatra marani-tsaina an'ny fizarana Google antsoina hoe Nest | Androidsis
Amazon hampitsahatra ny fivarotana vokatra marani-tsaina avy amin'ny fizarana Nest Google
Ny fitaovana marani-tsaina dia nanjary singa lehibe kokoa noho ny mahazatra amin'ny trano maro. Mihabetsaka ny mpanamboatra miloka amin'ity karazana vokatra azontsika fehezina amin'ny alàlan'ny finday avo lenta ity, amin'ny alàlan'ny mpanampy virtoaly antsika ... Koa satria ampitahain'ny Google ny Nest, ity farany dia nanitatra ny isan'ny vokatra tao amin'ny katalaoginy, mitohy manolotra ho fanampin'ny termostat, fakantsary fiarovana.
Ireo fakantsary fiarovana ireo dia manana isa tena tsara amin'ireo mpividy rehetra ary ny ankamaroan'izy ireo dia misy amin'ny Amazon, saingy mandra-pahatapitry ny ela, satria raha ny filazan'ny orinasa ny vokatra manaraka dia tsy ho hita ao Amazon. Ity fanapahan-kevitr'i Amazon ity dia niteraka fahasosorana tamin'i Nest, izay nisintona mivantana ny vokatra rehetra avy tao amin'ny magazay virtoaly Amazon.
Araka ny Business Insider, raha lany ny tahiry vokatra ananan'ny Nest amin'izao fotoana izao ao Amazon dia tsy ho hita mivantana amin'ny alàlan'ny orinasa intsony izany. Ity diksionera ity dia toa avy any ambony, izany hoe, izay mandray ny fanapaha-kevitra any Amazon, ka azo inoana fa i Jeff Bezos, CEO an'ny Amazon, na iza na iza naka azy.
Ny antony dia tsy iza fa ny fifaninanana izay azon'ity karazana vokatra Google ity atao amin'ireo vokatra mifandray izay natombok'i Amazon tato anatin'ny volana vitsivitsy, fitaovana marani-tsaina azo fehezina mivantana amin'ny alàlan'ny finday na amin'ny alàlan'ny mpanampy virtoaly Amazon antsoina hoe Alexa.
Nest, izay niankina tamin'ny Amazon hizara ny vokatra erak'izao tontolo izao, dia iharan'ny famelezana mafy an'i Amazon, satria tsy afaka miantehitra amin'ireo fotodrafitrasa aroson'izao tontolo izao izy, ka tsy maintsy manomboka hatrany am-boalohany izy mba handaminana indray ny fivarotana ny vokatra, raha te hanohy ho safidy hafa ao amin'ny tontolon'ny fakantsary marani-tsaina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Amazon hampitsahatra ny fivarotana vokatra marani-tsaina avy amin'ny fizarana Nest Google
Fampiharana Android tsara indrindra amin'ny fikarakarana ny biby fiompinao